Maamulayaal cusub oo loo xushay laba dugsi hoose | Faahfaahinta Wararka Degmada - Dugsiyada Dadweynaha ee Harta Biyaha ee ISD 834
Labada maamule hoose ee kumeelgaarka ah ee degmada ayaa hada leh jagooyin cusub, oo joogto ah sanad dugsiyeedka soo socda. Gina Doe iyo Dr. Christopher Rogers ayaa loo xushay inay noqdaan hogaamiyaasha xiga ee dugsiyada hoose ee Afton-Lakeland iyo Brookview.
Gina Doe waxay u guuri doontaa Dugsiga Hoose ee Afton-Lakeland deyrta. Waxay maamule ku meel gaadh ah ka noqotay Brookview ilaa iyo bishii Diseembar 2020. Doe waa hoggaamiye xiriiriya oo leh khibrad ballaadhan oo ku saabsan hoggaaminta waxbaridda iyo horumarinta macallinka. Waxay leedahay ballanqaad adag oo ku saabsan sinnaanta iyo qalbi ardayda iyo qoysaska aan u adeegin bulshadayada dhexdeeda ah.
Kahor intaan loo magacaabin maamule kumeelgaarka ah Brookview, Doe wuxuu laba sano ku qaatay kaaliyaha maamule ee Dugsiga Dhexe ee Stillwater. Kahor imaatinkeeda Stillwater waxay ahayd hormuudka ardayda waxkabarta Chippewa Middle School ee Mounds View. Waxay shaqadeedii ka bilawday macallin saynis sidoo kalena waxay u noqotay macallin waxbarid. Waxay haysataa bachelor-keeda iyo shahaadada masters-ka ee barashada Jaamacadda St. Thomas. Waxay sidoo kale haysataa shahaadada qalin-jabinta ee STEM iyada oo loo marayo St. Kates iyo shahaadada takhasuska waxbarashada.
"Gina waa diiran tahay, soo dhaweynaysaa, ardayduna diirada saaraysaa," ayay tiri kormeeraha guud Malinda Lansfeldt. Waxay u soo istaagtay si ku meel gaar ah bartamihii sanadka - intii lagu jiray faafida - waxayna u kacday caqabad kasta oo iyada ka hor timaadda. Iyadu waa iskaashi oo waa loo dhowaan karaa, qaabkeeda hoggaamineedna waa mid ku habboon bulshada Afton-Lakeland, ”
Maadaama uu yahay maamulaha ugu horeeya degmada, Dr. Chris Rogers ayaa loo xushay inuu hogaamiyo Brookview Elementary School, oo ka mid ah iskuulada ugu kala duwan degmada. Wuxuu maamule kumeel gaar ah ka soo noqday Afton-Lakeland tan iyo bilowgii sanad dugsiyeedka 2020-2021. Dr. Rogers wuxuu leeyahay waayo-aragnimo sannado ah oo ku saabsan dhaqammada dib-u-soo-celinta iyo baridda dhaqanka la xidhiidha, iyo ballan-qaad adag oo lagu hubinayo sinnaanta waxbarashada.
Kahor ku biiritaanka Stillwater, Dr. Rogers wuxuu u soo shaqeeyey macalin khaas ah oo wax ka dhiga Dugsiyada St. Cloud iyo Dugsiyada Aagga Osseo, iyo kaaliyaha maamule ee Dugsiyada Dadweynaha Mankato. Dr. Rogers wuxuu dhowaan dhammeystiray Ed.D-ga Jaamacadda St. Cloud State University. Waxa kale oo uu haystaa shahaadada koowaad ee jaamacadda iyo shahaadada masters-ka jaamacadda St. Cloud State University.
"Chris wuxuu leeyahay qalbi ardayda, waana mid aan ku qanacsaneyn rabitaankiisa ah inuu meesha ka saaro caqabadaha si loo hubiyo in canug walba uu guuleysto," ayuu yiri Lansfeldt. "Wuxuu u abuuraa meel aamin ah ardaydeena, shaqaalaheena iyo qoysaskeena wuxuuna sii wadi doonaa inuu ku sii adkeeyo dhaqammada adag ee ka jira Dugsiga Hoose Brookview."
Doe iyo Dr. Rogers labaduba waxay dhammeyn doonaan sanad-dugsiyeedka dugsiyadooda hadda waxayna u wareegi doonaan boosaskooda cusub xagaaga.
Ma xiiseyneysaa cunno bilaash ah carruurtaada xagaagan?
Waxaan siin doonnaa cunnooyin bilaash ah cunug kasta oo ka tirsan beesheena da'doodu u dhexeyso 1 illaa 18 xagaaga oo dhan.
Afar ayaa loo xushay 2021 Qalinjabiyeyaal Kala Duwan
Fasalka sannadkan ardayda sharafta leh waxaa ka mid ah: Julie Kink (Fasalka 1979); Kami Mendlik (Fasalka 1991); Marlena Chow Morgan (Fasalka 1996); iyo Mark J. Salmen (Fasalka 1969).
Ardayda dhigata dugsiga sare waxay ardayda yar yar u bartaan cashar ku saabsan dhaqanka iyo aqbalaadda
Laba ka mid ah waayeelka dugsiga sare ayaa la wadaagay dhaqankooda waxayna barteen ardayda dugsiga hoose ee degmada oo dhan xijaabka ay xirtaan dumar badan oo muslim ah.
Ka shaqeynta joojinta cunsuriyada hal qoys markiiba
Qoysaska ku nool degmada oo dhan waxay wax ka baranayaan taariikhda midab takoorka iyo waxa ay sameyn karaan si ay uga caawiyaan joojinta bulshadayada.
Qoysku waxay buugaag ugu deeqaan Xarunta Qoyska ee Carruurnimada Hore si loogu sharfo daryeelka la helay
Qoyska Nousiainen ayaa dhawaan gaarsiiyey buugaag gaareysa 44 buuga Xarunta Carruurnimada Hore ee Carruurta (ECFC) halkaas oo gabdhahooda mataanaha ah ay ka heleen daryeel gaar ah
Ardayda Stillwater waxay kaalinta 2-aad ka galaan tartanka caalamiga ah ee NASA
Ardayda ka socota Dugsiga Sare ee Stillwater Area waxay kaalinta 2-aad ka galeen tartan injineernimo caalami ah oo ay soo saartay NASA.
Naadiga Hawada sare ee dunidan
Qiyaastii dersin ardayda fasalka lixaad ayaa qayb ka ah Kooxda Naadiga ee dhowaan la sameeyay. Waxay la kulmayeen iskuul kadib markay ka shaqeynayeen caqabadaha naqshadeynta injineernimada ee udub dhexaad u ahaa safarka Dayaxa.
Ardaydu waxay kahadlaan isbedel ku yimaada iskuulkooda
Ku dhowaad 130 ardayda dugsiga sare ah ayaa isugu soo ururay si cad si ay si furan uga hadlaan caqabadaha ay la kulmaan, ama ay kala kulmeen, xirfaddooda waxbarasho.